Izinzuzo zethu - Yuyao Jera Line Fitting Co., Ltd.
UJera uzibophezele ekunikezeni izinhlelo zethu zokuncintisana neziphelele kubasebenzi bethu. Izinzuzo zethu zifaka imininingwane elandelayo:
Iphakethe Lokukhokha Elihehayo
UJera unikeza abasebenzi iphakethe lokuhola elikhangayo nendawo yokusebenza ekhuthaza ukukhula nentuthuko.
Ngaphezu kweholo elincintisanayo, sinikeza izinzuzo ezahlukahlukene kubasebenzi bethu okubandakanya umvuzo wokuthengiswa kwethimba, inhlalakahle yabasebenzi, imixhaso yamaholide esiko nokunye. Le mivuzo yezezimali ingakhuthaza futhi inike amandla abantu bethu ukuthi baqhubeke nezifiso zabo, bandise ubuchwepheshe babo iziqu futhi ucije amakhono abo ukuze enze umehluko wangempela ekusaseni labo.
Impilo nokuphila kahle
UJera unaka ukunakekela isisebenzi ngasinye ngokomzimba nangokwengqondo.
Sinikeza umshuwalense wokuphila oyisisekelo nokuhlolwa njalo kwezempilo. Sibamba izinkulumo zenhlalakahle njalo nemisebenzi yokwakha amaqembu ukusiza abantu bethu bazizwe bekhulu futhi bakhe ukuqonda okujulile nobudlelwano phakathi kwethu.
Isikhathi esikhokhelwe sicishiwe （PTO）
UJera unikela ngesikhathi sokuphumula esikhokhelwayo ngesikhathi seholide lonyaka kanye namaholide esizwe kazwelonke. Siyakuqonda ukubaluleka kokuba nesikhathi emsebenzini, kuvumela abasebenzi ukuthi babe nethuba lokuziqabula futhi babe nesimo esingcono sokuqhubeka nomsebenzi nomsebenzi.
Ngaphezu kwalokho, sikhokhe isikhathi sokuxhuma izingane kanye nokugula emsebenzini, okusiza abasebenzi bethu ukuthi bathole izibonelelo eziyisisekelo zokuphila uma bengekho emsebenzini.
UJera ukholelwa ukuthi impumelelo yenkampani kanye nengcebo incike kubantu bayo, sitshala imali kubasebenzi bayo kuyo yonke imisebenzi yabo nenkampani ukubasiza ukuthi bathuthukise ngokugcwele amakhono abo nobuchwepheshe babo.
Sinikeza ukuqeqeshwa nentuthuko ukuthuthukisa amakhono abantu bethu futhi sibahlomise ngamakhono, kufaka phakathi ukuthuthukiswa kobuholi, ukuphathwa kwamaphrojekthi, amakhono okuthengisa nokuxoxisana, ukuphathwa kwezinkontileka, ukuqeqesha nokuphathwa kobudlelwano bamakhasimende.Izinhlelo zethu zokuqeqesha azisizi nje kuphela abasebenzi ukuthi bathuthukise ukusebenza kwabo ku indima yabo yamanje kepha futhi kubalungiselela ukuthi bathathe isikhundla esinzima kakhulu ngokuzayo.